Kedu ihe kpatara Bing ji nweta mmeri vidiyo na Google | Martech Zone
Satọde, 13 Juun 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Google nwere ike ị na -ele obere ntakịrị anya na ederede. Lelee ezigbo ọdịiche dị n'etiti Nsonaazụ ọchụchọ vidiyo nke Google na Nsonaazụ vidiyo vidiyo nke Bing. Anaghị m enye Microsoft otuto na ngalaba ojiji - mana ha kpọgidere nke a!
Nsonaazụ ọchụchọ Google na Google
Nsonaazụ ọchụchọ vidiyo Bing
Bing na-egwu vidiyo Bing
Nke a bụ mpaghara nke njirimara atụmatụ Bing Video Search na Google Video Search:
Mgbe ị na-agagharị na Bing, vidiyo ahụ na-ada ụda na ụda. Google na - enye gị ohere ịfefe n’ime ọdịnaya - mana ọ bụ naanị mgbe ịpịrị igwu vidiyo ahụ na ntanetị ha.
Bing na-enye nyocha buru ibu nke nseta ihuenyo ahụ karịa Google - onye dabere na ederede na-enweghị isi. Vidio bụ ihe ọhụụ, Bing na-ekwe ka ibute ụzọ. Nwere ike ịfefe aha na Bing iji nweta aha zuru oke ma ọ bụrụ na egbutu ya.
Mgbe ị na-egwu vidiyo na Bing, ọ fọrọ nke nta ka ha nwee peeji peeji… kediegwu - ọkachasị maka ọdịnaya ọhụrụ, nkọwa dị elu. A ka edepụtara vidiyo ndị ọzọ n'okpuru ma nwee ike ịmegharị onwe ha mgbe ị na-atụgharị ha.
Ibelata nhọrọ nhọta gị dị mfe ma kensinammuo na akụkụ aka ekpe na Bing. Google chọrọ ka ị pịa Advanced Video Search iji nweta otu nhọrọ nzacha.
Google anaghị eme nke kacha mma ma ọ bụ mara mma nke ibe, mana peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ha bụ ihe enweghị njikwa na jọrọ njọ. N'uche m, Bing arụwo ọrụ dị egwu na-atọgbọ ibe ahụ ma na-eme ka ọ nwekwuo ike. Chọ video siri ike - na algọridim abụghị ndị kasị ukwuu… ị na-enwe ibiaghachi gburugburu a otutu. Nchịkọta Bing na iji rụọ ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọ, chọgharịa ma chọta vidiyo ị na-achọ.
Tags: adịghị anyaadalvib2b ndi ozoihe na-adighi nmadanfahrnerOnyekwere